သင်က Ammonium နိုက်ထရိတ်အကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ
Ammonium နိုက်ထရိတ်ဟာ Ammonium စုံလုံ၏နိုက်ထရိတ်ဆားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပိုတက်စီယမ်နိုက်ထရိတ်သို့မဟုတ် saltpeter ဖို့ Ammonium Analog စစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။ ယင်း၏ဓာတုပုံသေနည်းနယူးဟမ်းရှား4NO3သို့မဟုတ် N2H ကို4အို3ဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကြယ်သောပုံစံများတွင် Ammonium နိုက်ထရိတ်အလွယ်တကူရေထဲမှာပျော်ဝင်တဲ့ပုံဆောင်ခဲအဖြူအစိုင်အခဲသည်။ အပူသို့မဟုတ်စက်နှိုးအလွယ်တကူပစ္စည်းဥစ္စာလောင်ကျွမ်းသို့မဟုတ်ပေါက်ကွဲစေ။ Ammonium နိုက်ထရိတ်အဆိပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါ။
Ammonium နိုက်ထရိတ်ရယူဘို့ Options ကို
Ammonium နိုက်ထရိတ်စင်ကြယ်သောဓာတုအဖြစ်ဝယ်ယူသို့မဟုတ် instant အအေးထုပ်ဒါမှမဟုတ်တချို့ဓာတ်မြေသြဇာကနေကောက်ယူနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါဒြပ်ပေါင်းအများဆုံးတုံ့ပြန်သဖြင့်ပြင်ဆင် နိုက်ထရစ်အက်ဆစ် နှင့် အမိုးနီးယား ။ ဒါဟာဘုံအိမ်ထောင်စုဓာတုပစ္စည်းထံမှ Ammonium နိုက်ထရိတ်ပြင်ဆင်ထားရန်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Ammonium နိုက်ထရိတ်ပါစေရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်စဉ်တွင်ပါဝင်သည့်ဓာတုပစ္စည်းများအန္တရာယ်ရှိသောနိုင်ပါတယ်ကြောင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အန္တရာယ်ရှိသည်။ လောင်စာသို့မဟုတ်အခြားဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အတူရောနှောတဲ့အခါမှာအပြင်, ကအလွယ်တကူပေါက်ကွဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Ammonium နိုက်ထရိတ်အအေးကဒ်တစ်ခုပါဝင်ပစ္စည်းကဲ့သို့၎င်း, သိပ္ပံဆန္ဒပြပွဲများအဘို့, pyrotechnics စေရန်တစ်ဦးဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အသုံးပြုတဲ့ဓာတုဒြပ်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစသတ္ထုတူးဖော်ရေးနဲ့ကြောကျကငျြးထဲမှာထိန်းချုပ်ပေါက်ကွဲမှုဖန်တီးရန်အသုံးပြုပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ချိန်ကချီလီ၏သဲကန္တာရထဲမှာတစ်ဦးကသဘာဝဓာတ်သတ္တု (niter) အဖြစ်တူးဖော်ပေမယ့်တစ်ဦးလူလုပ်ဒြပ်ပေါင်းအဖြစ် မှလွဲ. မရှိတော့ရရှိနိုင်ပါသည်ခဲ့သည်။ Ammonium နိုက်ထရိတ်အလွဲသုံးစားစေခြင်းငှါသောကြောင့်, ဒါကြောင့်နိုင်ငံအများအပြားထွက် phased ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
School တွင်သိပ္ပံတရားမျှတသောစီမံကိန်းအကြံပြုချက်များ: တိမ်
လက်ငင်းစာရွက် crystal ဟာတိုးတက်ကြီးပွားစေရန်ဘယ်လို
ခရစ္စမတ်ဓာတုဗေဒ - Peppermint Cream န့်ကို Make ရန်ကဘယ်လို
စုစုပေါင်းဝယ်လိုအား & စုစုပေါင်းထောက်ပံ့ရေးအလေ့အကျင့်မေးခွန်း
အဆိုပါ 1984 Ford ကား Mustang နှစ်မြောက် Edition ကို GT350
Ping-Pong Play လုပ်နည်း
10 စိတ်ဝင်စားဖို့ DNA ကိုအချက်အလက်
Agnes ဖြစ်သူ Scott ကောလိပ်အဆင့်လက်ခံရေး
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: သင်္ဘော USS မစ္စစ္စပီ (BB-41)
သီချင်းအမျိုးအစားကဘာလဲကာရစ်ဘီယံ မှစ. Come?
ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာအတွက် Flotation Method ကို
ပွငျသစျထဲတွင် '' ငါ 'ဟာပေးစာစီရင်ဖို့ကိုဘယ်လို
အဆိုပါ Beatles ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို
ဖရန့် Furness, Philadelphia တွင်များအတွက်ဗိသုကာ